Ukuqeshisa nge-Airbnb eArizona kwizibhambathiso zokukunyanga njengeNkwenkwezi ngePhuli yeNdawo yokuHlala kunye neeNkonzo. - Indlela Yokuphila
Ukuqeshisa nge-Airbnb eArizona kwizibhambathiso zokukunyanga njengeNkwenkwezi ngePhuli yeNdawo yokuHlala kunye neeNkonzo.
URachel / Airbnb
UAirbnb usisikelele kwakhona enye irente ephezulu wena kunye nabahlobo bakho phuma njengeenkwenkwezi ngaphandle kokuqhekeza ibhanki. Igumbi lokulala eliphuphileyo elinamagumbi asixhenxe, igumbi lokuhlambela elinamagumbi amahlanu kwigumbi lokuhlambela eScottsdale, eArizona, linegama elimnandi elithi, 'Indlu yePhuli,' ephefumlelwe (yintoni enye into?) Iphuli enkulu enesitayile esihleli kwindawo entle.
Khupha ibha yokuqubha ebekwe phantsi komthunzi ohlaza okwesibhakabhaka!
Awusoze uphelelwe zizinto oza kuzenza kule ndawo yangasemva!
Indawo yangaphandle ibonelela ngaphezulu kokuqubha, nangona kunjalo. Iindwendwe zinokonwabela ikhosi yegalufa encinci, inkundla yebhasikithi, i-shuffleboard, umngxuma womlilo, ikhitshi elingaphandle, indawo yokuhlala ithala, nokunye okuninzi. Okukwintsusa: Yindawo efanelekileyo yokubamba ipati ye-pool yemihla ngemihla. Ingaphakathi lendlu linomtsalane kanye. Ngophalethi opholileyo nozolileyo ongwevu, omhlophe, kunye no-turquoise, izinto zangaphakathi zilapha apho intuthuzelo idibana khona nentuthuzelo. Ikhaya eliphangaleleyo lixhotyiswe ngezinto zentsimbi ezingenasici, iindlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa, kunye nefososball kunye netafile ye-poker.
Igumbi lokudlala eligqibeleleyo lokuphumla emva kokuchitha usuku echibini.
Ukuba uzama ukufumana unyango olusemgangathweni ngeenkwenkwezi, irente inikezela ngeenkonzo ezongezelelweyo ngentlawulo eyongezelelweyo. Oku kubandakanya: inkonzo yokugcina indlu yonke imihla, inkonzo epheleleyo ye-concierge, ukutya kunye nabapheki basekhaya, ukuthambeka kwasekhaya, i-yoga yasekhaya, kunye nokugcina abantwana ekhaya. Ngelixa le propati isenokungabi * bubuchwephesha * njengendawo ekuchithelwa kuyo iiholide, icwangcisa ukukwenzela njengendwendwe lalo. 'Le propati ilawulwa ngobungcali kwinqanaba elifanayo lokuqwalaselwa kweenkcukacha kunye nazo zonke izinto eziluncedo onokuzilindela kwindawo ekuchithelwa kuyo iinkwenkwezi ezi-5 ezinje ngeSine Seasons okanye iRitz-Carlton,' kufunda uluhlu. Ngokunyaniseka, ayothusi into yokuba eli khaya lizifumanele inqanaba leenkwenkwezi le-5.0. Ngaba uhendiwe? Bhukisha ukuhlala kwakho Apha .
Umbhede ogqibeleleyo wokulala ngaphakathi emva kosuku lokumnandi emva kwendawo yokupaka amanzi!
Izipho zekrisimesi izimvo zeentsapho
imithi kunye neentsingiselo
indawo yokuhlambela neyomzimba isebenza
Imizobo yehalloween kwinqanawa
izimvo zamakhadi ekrisimesi